Isi > Akụkọ Ndị Ịga nke Ọma > Kedu ka ị ga - esi mee ego n'ụlọ
29.12.2018 · 0 · Ntinye niile maka December 2018
Kedu ka ị ga - esi mee ego n'ụlọ?
Akụkọ banyere Elena Shaparenko, afọ 28, Astrakhan bụ ihe atụ doro anya banyere nwanyị azụmahịa na-eme nke ọma. Ọ na-enweta ego ya site na iji oge na kọmputa. N'otu oge ahụ, ọrụ ya zuru oke. Onu ogugu ahia nyere gi aka ime ndu ya na ndu umuaka abuo mara mma dika o kwere mee. Otú ọ dị, ka anyị nweta ihe niile.
Anyị zutere Elena na tebụl na ezigbo ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ebe ọ bịarutere ụlọ ọrụ klas nke kachasị elu, ma, n'ezie, ajụjụ mbụ bụ otú otu nne nwere ike isi nweta ego dị oké ọnụ ahịa?
Mmalite nke e guzobere Elena dịka nwanyị nwere ihe ịga nke ọma bụ ezigbo nkịtị:
Ịgba alụkwaghịm site na di ya.
N'aka ụmụ abụọ mara mma (4 na 6 afọ).
Ego kacha nta maka ndụ.
N'ịbụ ndị na-atụghị anya na ụgwọ ego a na-akwụghị ụgwọ, anyị heroine gbalịrị ịchọta ọ dịkarịa ala ọrụ ụfọdụ iji nye ezinụlọ ya nri. Ma nsogbu akụnụba, nsogbu ọrụ na nsogbu onwe onye Helen anaghị ekwe ka ịchọta ebe dị mma. Obi nkoropụ nke nne nanị ya na-azụ ụmụ ruru ókè. Nke a na-eyi nnukwu ezinụlọ ya nsogbu. Azịza nye ajụjụ banyere ụzọ e si eme ego n'ụlọ enweghị ụzọ ọ bụla.
N'otu oge, na-ele anya ọzọ maka ọrụ ndị na - adịghị arụ ọrụ, Elena hụrụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi. Binomo. Ụlọ ọrụ a na-enye ọrụ ego n'ịzụ ahịa ahịa.
Nanị site na enweghị olileanya na ịda mbà n'obi, Elena kpebiri ịmụ ebe a nke ọma. Ọtụtụ vidiyo nkwado na mkparịta ụka mmekọrịta gosipụtara ya ụwa ọhụrụ nke ego. Na ya na ngwá ọrụ maka ịzụ ahịa ego - oge nkwekọrịta.
Ịdị mfe na ịnweta nke usoro a nke inweta na oge mbụ nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-atụ aro na ndị a bụ ihe ọzọ ojoro. Naanị ha chọrọ ịchọta ego na ndị mmadụ. Ma, mgbe ị nụchara ihe ọmụma banyere ịzụ ahịa ngwa ngwa, na ị gụọ ndị ọkachamara ahịa nyocha Binomo, Elena ghọtara na nke a bụ ezigbo ohere na ndụ.
Kedu otu esi ekpebi ịrụ ọrụ na mpaghara a na-amaghị ama?
Elena zara ajụjụ a n'ụzọ dị nnọọ mfe. Nhụsianya na enweghị ego na-eme ka mmadụ na-eme mgbe ụfọdụ ihe na-enweghị atụ! "N'agbanyeghị eziokwu ahụ na ọ dịtụbeghị mgbe m zutere azụmahịa, ọzụzụ dị mfe na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ Binomo kwere m ka m ghọtazu nkà na ụzụ nke uru na ahịa. Tụkwasị na nke ahụ, ọganihu ahịa nke elu ruo 90% na otu nkwekọrịta nyere m mkpali ọzọ. Emere m mkpebi ikpeazụ iji rụọ ahịa ahịa ngwa ngwa, naanị ịjụ onwe m ajụjụ a - oge ole ka m na-etinye na kọmpụta ma enwere ike iji oge a mefuo ya? "
Didie ke enye ekeme ndinyene utịp utịp emi?
Ọtụtụ ndị na-eche na ịzụ ahịa n'ahịa ahịa bụ usoro dị mgbagwoju anya ma dị oke ọnụ maka nchịkọta ego. Ọ dịghị amasị ya! Ọrụ ntanetị maka gị, dị ka ihe ntinye ego, anaghị eri ihe ọbụla, na ọkwa nke ego bụ ego kachasị elu nke 10 $.
N'ezie, iji nweta ọkwa ego nke, sị, 1000 $ kwa ụbọchị, ị ga-achọ ọtụtụ oge. Ma, ebe o nyere 100 $, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iru ọkwa nke uru ahịa na ọnwa. Echela na ị chọrọ ka ọtụtụ nde mmadụ rụọ ọrụ na ego - ọ dịghị, ego kachasị oke! Ọ ka mma ịmalite obere ruo mgbe ị nwetara ahụmịhe na nkà ụfọdụ na mpaghara ọrụ a, ma rụzie ego ụfọdụ maka ịzụ ahịa karịa ịhapụ ihe niile ozugbo!
"Ihe mbụ m na-ere ahịa bụ nanị 50 $ ma nke a bụ ihe ikpeazụ m mere. Ma enwere m obi ike na m nwere ihe ịga nke ọma, ọ dịkwa m ọkụ n'obi inweta nsonaazụ ya! Taa, m na-arụ ọrụ karịrị 100 000 $ ma ego m na-akwụ kwa afọ bụ 90 000 $. "
"Ọ bụrụ na ị na-ewe ego ọ bụla, ọ bụ, na nkezi, 8000-9000 $, ọ bụ ezie na ịnwere ike ịnweta nsonaazụ ndị ọzọ. Ma, enwere m ụmụaka abụọ, achọkwara m iji oge dị ukwuu mee ha! "
Otu esi amalite ahịa nke oma - nkwenye nke onye ahia
Ndị a bụ ndụmọdụ Elena banyere otu esi amalite ahịa na-aga n'ihu n'ahịa ahịa na ụlọ ọrụ a nwapụtara. Binomo:
Mezue ndebanye aha na n 'ikpo okwu site n'injupụta obere ụdị.
Site n'enyemaka nke usoro ụlọ ọrụ weebụ nke ụlọ ọrụ, na-amụ ụzọ maka ịzụ ahịa na ọrụ nke ahịa ahịa ngwa ngwa n'ahịa ego.
Mee ahia na nhazi ihu igwe Binomo.
Gbanye ego kachasị elu na ahia ma banye n'ọrụ
Nweta uru ma nwekwaa ego.
Debanye na Binomo ma nweta 200 na 500 rubles kwa ụbọchị.
Ihe ndị ọzọ si na ụdị "Akụkọ Ọganihu"
Mee ka nkwụnye ego site na 700% maka ọnwa 2 nwere ike ịnwa
Mkpokọta 700 (2%) 5 ... nwere ike iwelie nkwụnye ego site na 100% maka 1 nke ọnwa ...
Otu esi enweta ego 100 kwa ụbọchị
Otu esi enweta 100 dollar kwa ụbọchị 4.7 (94.29%) 35 votes ...
25.10.2018 · 18
Otu esi esi na 200 gaa 500 rubles kwa ụbọchị 4.9 (97.33%) 15 votes ...
Onye ọ bụla nke na-achọ ịba ọgaranya na-apụ ma pụọ!
Ndị na-emegide ịghọ ndị bara ọgaranya - biliri lawa! 4.7 (93.33%) votes 3 ...
Amalitere m na clicks na azụ, ma ugbu a, m na-enweta 5000 rubles kwa ụbọchị! Akụkọ Mmeri
M malitere na clicks na igbe, ma ugbu a, m na-enweta 5000 rubles kwa ụbọchị! ...
Lenovo keere ọnụ ọgụgụ nke uru-efu